Planegbọ elu ndị Yukren nwere ndị njem 176 nọ na ya dara na Iran
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Planegbọ elu ndị Yukren nwere ndị njem 176 nọ na ya dara na Iran
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • News • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akụkọ dị iche iche
Otu ụgbọ elu ndị njem nke mba ụwa nke ndị Ukraine na ndị njem 176 nọ n'ụgbọelu kpọkasịrị n'ụtụtụ Wenesde obere oge ụgbọelu si Ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Imam Khomeini na Tehran, Iran, ụlọ ọrụ Tasnim na-akọ.
Ukraine International Airlines Flight 752 bụ ndokwa mba ụgbọ elu njem si Tehran gaa Kiev, Ukraine, nke Boeing 737-800 na-arụ ọrụ.
B737 gbadara n'isi ụtụtụ Wednesde na mpaghara Parand, obodo dị na Robat Karim County, Tehran Province.
O doro anya na okuku ahụ mere n'ihi "nsogbu ọrụaka", ụlọ ọrụ mgbasa ozi Iran FARS kwuru. Onye isi ụgbọ elu ahụ kwadoro ihe mberede ụgbọelu ahụ. Dị ka ya si kwuo, liner ahụ dara obere oge ọ kwụsịrị.
Akụkọ si Teheran na-ekwu na ọ nweghị ndị dị ndụ.
Enwere akụkọ na-akwadoghị na asịrị nke Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps ogbunigwe agha na-ebute okuku.
E zigala ndị ọrụ nchekwa na ebe ihe mberede a mere, Reza Jafarzadeh, onye na-ekwuchitere'stù Na-ahụ Maka Ọdụ ụgbọelu nke Iran kwuru, na-ekwu na ndị njem 170 nọ n'ụgbọ ahụ.
Ukraine International Airlines PJSC, nke a na-egbutukarị UIA, bụ onye na-ebu ọkọlọtọ na ọdụ ụgbọ elu kacha ukwuu na Ukraine, yana isi ụlọ ọrụ ya na Kyiv na isi ọdụ ụgbọ elu ya na ọdụ ụgbọ elu Boryspil International nke Kyiv.
Airgbọ elu ndị ọzọ na-ezere ebe ikuku Iran.
Singapore Airlines kwuru mgbe mwakpo ahụ na ntọala US na Iraq na ụgbọ elu ya niile ga-agbagọ pụọ na ikuku Iran.
Ndị na-ebu ụgbọ elu na-emewanye ihe iji kpughee egwu ha na-atụ mgbe ụgbọ elu Malaysia Airlines Flight MH17 gbagburu na 2014 site na ngwa agha na Ukraine, gbuo mmadụ 298 niile nọ n'ụgbọ ahụ.
Enwere akụkọ banyere # IRGC ogbunigwe agha na-ebute okuku.
#Ukraine ụgbọelu mkpọka n'elu Tehran Boing # 737-8 si #Theran na #igbo pic.twitter.com/FKtzUGSUFI
- Karimzadeh (@Almiran) January 8, 2020